ကြောင်တကောင်နှင့်အချင်းများခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကြောင်တကောင်နှင့်အချင်းများခြင်း
Posted by thit min on Sep 29, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 19 comments
ကျနော် “ကြောင်မှုရေး”တွင်ကားလွန်စွာညံ့ကြောင်းဝန်ခံရပေမည်။ နားရှုပ်သွားပါသလား? ရှင်းပါမည်။
ထထိုးကြ၍ပွဲဆူကုန်သည်မျိုးလည်းသတင်းများတွင်တွေ့ဘူးသည်။ အစည်းအဝေးခန်းများတွင်ဘဲဥပုံဒါမှမဟုတ်လေးထောင့်စပ်စပ်စားပွဲများခင်းထားရခြင်းမှာတယောက်နှင့် တယောက်ထမဌိုးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်ဟုဆရာမောင်စူးစမ်း၏
ကြောင်းပြသည်။ (Narrator)သတင်းနောက်ခံပြောသူကလဲအပြောကောင်းလှသည်။ ဤနိုင်ငံတွင်ကြောင်လေကြောင်လွင့်တသိန်း
ဘော့စ်ဟု　(Narrator)ကနာမည်ပေးထားသောကြောင်လေကြောင်လွင့်တကောင်၏နယ်မြေသတ်မှတ်ပိုင်ဆိုင်ပုံ၊ မယားယူထားပုံ၊ ကြောင်တို့၏
ဆုံးဖြစ်နေ၍အဆင်ပြေစွာပင်ကြောင်စာခွက်၊ ရေခွက်များချပြီးမနက်တကြိမ်၊ ညအိမ်ပြန်လာချိန်တကြိမ်အစာထဲ့ရေထဲ့ကြွေးဖြစ်တော့သည်။
ဤအိမ်တွင်(၁၂) နှစ်ကျော်နေခဲ့သဖြင့် ၁၂ နှစ် ဤအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒါနပြုခဲ့သည်။
လာစားသောကြောင်များသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှသည်။ တခါတရံကြောင်၃ ကောင်ခန့်ခေါင်းချင်ဆိုင်စားနေသည်
ကိုတွေ့ရတတ်သည်။ နောက်မှာစားရန်စောင့်နေသောေ ကြာင်များကစောင့်နေသော်လဲအော်ဟစ်ချင်း၊ ရန်ပြုချင်းအလျင်းမရှိ၊ အေးဆေးငြိမ်သက်စွာစားကြသည်ပိုထူးခြားသည်မှာ ယခင်လာစားဖူးသောေ ကြာင်က လာမစားဖူးသောကြောင်ကိုလမ်းပြခေါ်ဆောင်လာခြင်းပင်တည်း။ (အမျိုးဖြစ်ခြင်လဲဖြစ်မှာပေါ့နော်)
အံ့ဖွယ်သုတ။ တခုခုရဘို့အတွက်တိုက်ခိုက်ကြ၊ အချင်းချင်းအစာခွက်လုကြလေ့ရှိသောလူသားတချို့ကိုသင်ခန်းစာပေးနေသကဲ့သို့။
4 နှစ် သားခန့်ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ (Narrator)၏စကားကိုကိုးကားရလျှင်
အသက်၂၀ ကျော် ၂၅ နှစ် ကြားကြောင်လူငယ်ဟုဆိုရမည်။
ကြားရလို့ချမ်းချမ်းနဲ့ထဖွင့်ကြည့်တယ်။ အိပ်ချင်းမူးတူးနဲ့တံခါးဖွင့်ကြည့်တာဘယ်သူမှမတွေ့။ အောက်ကို
“ဝတ” ကိုတွေ့ပီ၊ ဪမင်းလုပ်တာကိုး။ တံခါးကိုပုတ်ခါဖွင့်ပေးအောင်လုပ်ရမည်ကိုနားလည်သောကြောင်ပါတကား။
လူကိုမော့ကြည့်ပြီး၊ ညောင်ဟုတချက်အော်သည်။ မျက်စိတဲ့တဲ့ကြည့်ပြီးအော်ပုံကထူးခြားသည်။
ဝတ ကားနွေးထွေးစွာအိပ်လေပြီ။ အဟောသုခံ ကောင်းလေစွ။
ဒီလိုနဲ့ဝတ မနက်ဆိုထွက်သွားအစာစား၊ ညမိမိပြန်လာချိန်အိမ်ရှေ့မှကြိုသောအလုပ်ကိုပါလုပ်သည်။
ဝတ အိမ်ထဲအိပ်တာ ၂ လလောက်ကြာသွားခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ၏ရေခဲအမှတ်ရောက်သောအအေးဆုံးကာကများရောက်လာပြီ။
ကျောင်းပိတ်ထားသော်လည်းသုတေသန( )လုပ်စရာ၊ အလုပ်များရှိသဖြင့်ကျောင်းကသွားနေရသည်။
တနေ့ကျောင်းအရောက်၊ သူငယ်ချင်းတယောက်က”မင်းအိမ်မှာကြောင်မွေးထားသလား” ဟုမေးသည်။
ပါးစပ်ကမဖြေပဲတစုံတရာကိုမိမိ၏ဆွယ်တာပေါ်မှယူ၍သူငယ်ချင်းက ပြသည်။ သူပြသည်က ကြောင်မွှေးတွေ။
လန့်သွားသည်။ နိုင်ငံတကာမှကျောင်းသားများရှိသောကျောင်းဖြစ်၍(မြန်မာလူမျိုးကို အထင်မသေးစေရန်ဟူသောစိတ်ကလေးနှင့်)အတတ်နိုင်ဆုံး
သူငယ်ချင်းကိုအေးကွာ ဟုတ်တယ်ကြောင်တကောင်မွေးထားလို့ဟုရီရီမောမောပြောနေသော်လည်း စိတ်က”တင်း”နေပြီ။
ဒီကြားထဲဟိုကောင်ကရှည်နေသေးတယ်၊ မင်းသိမှာပါ၊ ရောဂါဖြစ်တတ်တယ်၊ ဂရုစိုက်၊ ဘာညာလုပ်နေသေး။
အေးအေး ဟု ခပ်တိုတိုပြောပြီးအိမ်သာဖက်ထွက်လာလိုက်သည်။
ကြောင်မွှေးတွေအဆုတ်ထဲ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲဝင်ရင်ပန်းနာရင်ကြပ်၊ အဆုတ်ရောဂါတွေဖြစ်တတ်သတဲ့။
လုံးလေးတွေအဆုတ်ထဲမှာပြည့်နေကြောင်း၊ ဝါဂွမ်းစက်ရုံမှအလုပ်သမား၏အဆုတ်မှဝါဂွမ်းလုံးကလေးများ၊ အစရှိသဖြင့်။ .။
ဒါနဲ့အိမ်လဲပြန်ရောက်ရော၊ အိပ်ယာခင်း၊ ခေါင်းအုံးစွပ်များအကုန်ချွတ်ပြီးလဲသည်။ တခန်းလုံးဖုန်စုပ်စက်နှင့်အသားကုန်စုပ်ပလိုက်သည်။
အိပ်ယာပေါ်မှကြောင်မွှေးများကအိပ်ယာဘေးတွင် မနက်မိုးလင်းလင်းချင်းအိပ်ချင်မူးတူးနှင့်မရှာချင်၍အဆင်သင့်ထုတ်ထားလေ့ရှိသော အဝတ်အစားများပေါ်ကကြောင်မွှေးများက
ဝတ အိပ်ယာ ပေါ်တက်ကြောင်းထင်ရှားပေပြီ။
ပြန်ချိန်စောနေ၍ဝတ ကိုမတွေ့၊ ယင်းအိပ်သောစောင်ကိုယူ၍ အခန်းအပြင်ကော်ရစ်ဒါထောင့်တွင်
ညောင် ဟု တ ချက်အော်သည်။ တံခါးနားသွားပြီးအိပ်ရန်နေရာကိုသွားအောင်ညွန်ပြလိုက်သည်။
ညဉ့်ကနက်လာပြီ၊ အအေးဓာတ်ကသိသိသာသာပိုကဲလာပြီ။ ( )ဖွင့်အိပ်သဖြင့်နွေးနွေးထွေး ထွေး အိပ်ပျော်သွားသည်။
မော့ကြည့်သည်၊ ညောင် ဟု အော်သည်၊ ဝင်ခွင့်တောင်းနေပြန်ပြီ။
သူနေရာသူနေမယ်ဆိုရင်မဆိုးပါဘူးဟုတွေး၍ကတ်ထူ၊ ဂျပ်ထူပုံးကိုအိမ်ထဲသွင်းအခန်းထောင့်မှာထားပေးလိုက်သည်။ ထူးထူးခြားခြားလုပ်စရာကလဲမရှိ၊ နဲနဲလဲအိပ်ချင်နေသေး၍ပြန်အိပ်လိုက်သည်။
ဟာဟု လန့်သွားပြီး၊ ချက်ချင်းအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်ပလိုက်ရသည်။
မဖြစ်ဘူးကွ၊ မင်းကစည်းကမ်းမရှိဘူး၊ ငါကအိပ်ယာပေါ်အတက်မခံနိုင်ဘူးကွာ။
မင်းအပြင်မှာအိပ်ပါဟုလူ လိုပြောပြီး၊ အိပ်ယာပုံးလေးရှိရာအပြင်ကော်ရစ်ဒါထောင့်သို့ပို့ပေးလိုက်သည်။
ခြုံလိုက်ချိန်ဝတ တံခါးခေါက်ပြီ၊ ထ၍ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။
ထပ်ပြောသည် အဲ ထပ်ညောင် သည်။
၂ မိနှစ်ခန့်ကြာသွားသည်။ ထူးထူးခြားခြားတခုတွေးလိုက်မိသည်။
အဝင်တံခါးကအကျယ်ကြီးပဲ၊ ကြောင်ပဲနော် ဝင်ချင်ရင်ပြေးဝင်ရုံပဲပေါ့၊ ဘေးဘယ်ညာကဝင်မလား၊
ခြေထောက်ကြားကဝင်မလား၊ ဝင်လို့ရနေတာပဲ၊ မဝင်တာထူးဆန်းသည်။
အချေအတင်ဖြစ်နေသည်။ ညောင် ပဲ ညောင်နေ့သည်။
၅ မီးနစ်ခန့်ကြာသွားသည်ထင်သည်။ အကြာကြီးတချက်စိုက်ကြည့်ပြီး ဝတ လှုပ်ရှားလိုက်သည်။
လှေကားရှိရာသို့ဦးတည်သည်။ နောက်ကိုတချက်လှဲ့ကြည့်လိုက်သောဝတ ၏မျက်လုံးများကအဓိပ္ပာယ်ရှိလှသည်။
အိမ်ထဲဝင်ရန်ငြင်းဆန်ရင်၊ အပြင်ကဂျပ်ထူပုံးထဲလဲမအိပ်လိုတော့ပီလားဝတ ?
သင်တနေရာကနေ ပြောနေမှာလား ဝတ?
၁ပတ်၂ပတ်၊ လုံးဝမလာတော့၊ အက်ဆီးဒင့်တခုခုနှင့်
ပုံကိုဖွနေသော ဝတ ကိုတွေ့သည်။ အနားသွားသော်ထွက်ပြေးသွားသည်။
သူနှစ်သက်သော ငါး အနံ့အစာတို့နှင့်သေချာစွာဆေးကြောထားသောရေခွက်မှသန့်သန့်လေးများကို ဝတ စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီ။
ခုကနေပြန်စဉ်းစားလျှင်လွန်ခဲ့သော၁၅နှစ်ခန့်ဖြစ်၍ ဝတ ခု ချိန်ဆို ကွယ်လွန်ပါပြီ။
သို့သော်သူပေးခဲ့သော သင်ခန်းစာများကား များပြားလှပေသည်။
ကျနော်သည်လူမှုရေးကောင်းသည်ဟူပြောရန်မဝံ့ရဲသော်လည်းလူမှုရေးညံ့သူမဟုတ်သည်ကိုတော့ရဲဝံ့စွာအာမခံနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ကျနော် “ကြောင်မှုရေး”တွင်ကား………………………
ကိုသစ်မင်း ရဲ့ ပို့စ်လေးကို တော်တော်သဘောကျပါတယ် စဉ်းစားစရာတွေလဲ ရတယ်
ဘာမှ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ရတဲ့ ကြောင်လေးတွေ အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားအောင် ရေးနိုင်တာက ပညာပါ
NHK က အစီအစဉ်လေးတွေ ကြည့်ဘူးတယ် တကယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ် ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ရှင်းကနဲဖြစ်သွားတယ် ကလေးတွေကို ရှင်းပြတဲ့ ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ နမူနာ အရုပ်လေးတွေနဲ့ ရှင်းတာ
ဒီမှာ အဲဒီလို အစီအစဉ်လေးတွေ ပြရင်ကောင်းမယ်
ကြောင်ချစ်တယ်ဆိုပေမယ့် ကြောင်အမွှေးတွေက လူ့ ကျန်းမာရေးအတွက်မှ မကောင်းတာ ။ သီးခြားထားတာပဲ ကောင်းပါတယ်။
၀တ က စိတ်နာသွားတာကမှ ခံစားရတာ တော်ပါသေးတယ် ….
ခွေးကလေးတွေဆိုရင် သခင်က ဘယ်လိုရက်စက်ရက်စက် စိတ်မနာတတ်ကြဘူး … အမြဲတမ်း သခင်ကို ကြိုဆိုနေကြတာ မြင်ရတာ ရင်ထဲမှာ နင့်နေအောင်ခံစားရတယ် …
အိမ်မှာ..လူတယောက်ယောက်အသည်းအသန်ဖြစ်ရင်.. အိမ်က ကြောင်ကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးပြောကြတယ်..။
ကြောင်က.. လူပမာအနံ့ မခံနိုင်သလားမှမသိတာနော.. လို့တွေးမိတာပါပဲ..
ခွေးကတော့.. သခင်သေလည်း.. သူပါအိပ်ယာနားခွေနေတတ်တာမြင်ဖူးတယ်..။
အပေါ်ကစာထဲက.. ၀တ ဆိုတဲ့ကြောင်ကိုတော့..အံ့သြမိတယ်..။
ယုတ္တိမရှိ လက်မခံနိုင်ပေမဲ့ … အဲ့ဒီလို ပြောကြတာပဲ .. တိုက်ဆိုင်တာလား မသိဘူး .. ဖိုးဖိုးနာမကျန်းဖြစ်တုန်းက အဲ့ဒီအချိန် အိမ်မှာ ကြောင် ဆယ့်နှစ်ကောင်ရှိတယ် .. တပတ်လောက် အားလုံး အိမ်လည်ထွက်ကုန်ကြတယ် … နေပြန်ကောင်းပြီး ထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာမှပဲ .. ပြန်လာကြတယ် … ။
တက်နင်းမိပြီး ဦးနှောက်မကောင်းတဲ့ ကြောင်လေးကျတော့ နောက်တစ်နှစ် ဖိုးဖိုး အသည်းသန်ထပ်ဖြစ်တဲ့အခါ သူလည်း ပြေးရမှန်းမသိဘူးထင်တယ် … ။ ရောဂါမရှိပါပဲ … အကောင်းကြီးကနေ အိပ်ယာထဲခွေပြီး နှစ်ရက်မြောက်နေ့ကျတော့ သေရော … ။ အဲ့ဒီနှစ်ကလည်း ဖိုးဖိုး မသေခဲ့ဘူး … ။ တိုက်ဆိုင်တာပဲ ဖြစ်မှာပါ … လောကမှာ အသေစား အသေခံလို့မှ မရတာ .. ။
တကယ်သေတဲ့နှစ်လည်းရောက်ရော .. အိမ်မှာ ဘာကြောင်မှမရှိတော့ဘူး … ။
ကျွန်မသာဆို … သံယောဇဉ်ကြောင့် ကြောင်မွေးကပ်လည်း နှင်ထုတ်မိမှာ မဟုတ်ဘူးလေ … ။ အပြင်ပုံပန်း သဏ္ဍန်တွေထက် စိတ်ခံစားမှုကို ဦးစားပေးတဲ့ ကျွန်မအတွက်တော့ … ဇာတ်လမ်းလေး ဖတ်ပြီး ကြောင်လေးကို သနားမိတယ် … ။ အလေလွင့်ဖြစ်တဲ့ ဘ၀မှာ နားခိုရာလိုချင်တဲ့ သဘောပါပဲ … ။
အခုကျွန်မမွေးထားတဲ့ ကြောင်လေးဆိုလျှင် မနက်တိုင်း အိပ်ယာထဲဝင်ပြီး လာနှိုးတတ်တယ် … အရင်ကနှိုးလျှင် မျက်နှာကို လက်ဖ၀ါးလေးနဲ့ ပုတ်ပြီး နှိုးတတ်လို့ စိတ်မကြည်ပဲ နှိုးလာရတဲ့ တစ်ရက် မျက်နှာကို လက်နဲ့ ပုတ်လျှင် ရိုက်ခံရမယ်လို့ … လက်ကလည်းရွယ်ပြ ပါးစပ်ကလည်း ပြောပြတော့ .. စိတ်ကောက်ပြီး သုံးလေးရက်လောက် လာမနှိုးတော့ဘူး … ။ သူကြိုက်တဲ့ ရေခဲမုန့်ကျွေး ၊ ကန်စွန်းရွက်ကျွေးပြီး ပြန်ချော့လိုက်တော့မှ … ဒီနေ့ထိ ပြန်လာနှိုးပေးတယ် … နှိုးနည်းကတော့ ပြောင်းသွားတယ် … အရင်ကလို လက်နဲ့ မပုတ်တော့ပဲ … မျက်စိ ဖွင့်မကြည့်မချင်း တစာစာ အော်နေတော့တာ .. စိတ်မထင်လျှင် ခေါင်းကြီးတိုးပြီး .. နှာခေါင်းလေးနဲ့ …. လာလာနမ်းတယ် … ။ မကြိုက်ပေမယ့် သိတတ်တဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်လေးကို သဘောကျလို့ နေသာသလို နေခိုင်းလိုက်တော့တယ် … ။ အလုပ်သွားခါနီးလည်း .. ကြောင်စာလေး ထည့်ထည့်ပေးခဲ့ရတယ် … မေ့သွားလျှင် နောက်ကလိုက်ပြီးတောင်းတာ လမ်းမပေါ်ထိရောက်တယ် … ။ နောက်ပိုင်း ရုံးမသွားခင် အစာချကျွေးတဲ့ အလုပ်ကိုတော့ ကြောင်လေးကို သနားတဲ့စိတ်နဲ့ .. သတိထားပြီး လုပ်ပေးပါတယ် …
အရင်က ကျနော်လဲ.. ခြင်ထောင်ထဲ ကြောင်ထည့်ပြီး အိပ်တာဗျ
တော်တော်ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်..သူများလာတောင်းလို့ ပေးလိုက်ရတယ်
ချစ်ဖို့ ကောင်းအောင်နေတတ်တဲ့ကြောင်တွေရှိသလို..တွေ့ တာနဲ့ ရိုက်သတ်ချင်အောင် အကျင့်မကောင်းတဲ့ကြောင်တွေလဲရှိတယ်…
ချစ်စရာ.ကြောင်တွေဟာ…သူတို့ ကို စိတ်နာအောင်.အသားနာအောင်.တစ်ခုခုလုပ်မိလိုက်ရင် ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာတော့ဘူး..ဗျ
သောက်ချိုးမပြေတဲ့ ကြောင်သူခိုးတွေက ရိုက်ထုတ်လဲ..အချိန်တန်ရင်..လာလာခိုးစားတာပဲ
အရင်ကတော့ အိမ်မှာ ကြောင်ကလေး တစ်ကောင်မွေးဖူးတယ်
ကရင်နှစ်သစ်ကူးမှာမွေးလို့ သူ့ကို ကရင်လို့နာမယ်ပေးထားတာ
ကရင်က ကြောင်ပါးလေးပေါ့ သူ့ကို ချစ်တဲ့သူ အစာကျွေးနေကျလူဆို
အနားမှာ ကပ်ပြီး မစာလဲ အစာလိုက်တောင်းတက်တယ် တစ်ခါတစ်လေများ
သူ့မှာ အစာတောင်းနေရင်း ဗိုက်အရမ်းဆာနေသလိုမျိုး ပျာယာခတ်ပြတာတို့
မြေကြီးပေါ်မှာ လူးလိမ့်ပြတာမျိုးတွေပါ လုပ်ပြတက်တယ် တကယ်လည်းချကျွေးရာ
အသားလေးတွေ ချည်းရွေးစားသွားရော ဒီကောင်လေးက တစ်ခြား ကြောင်တွေလို
ကြောင်စာကျွေးရင် ကြောင်စာတစ်မျိုးတည်းကိုပဲ မစားဘူး ကြောင်စာစားလိုက်
ထမင်းနဲ့ ဟင်းနယ်ကျွေးတာ စားလိုက်နဲ့ အစားကလဲ ကြီးတော့ ဝတိုနေတာပဲ
တစ်နေ့တော့ ကြွက်ခုတ်ရင်း လေးလွှာလောက် အမြင့်ကပြုတ်ကျတာ အောက်က
ပုလင်းကွဲပေါ်ပြုတ်ကျရင်း သေသွားတယ်လေ ကရင်လေး သေသွားတော့
တစ်အိမ်လုံး စ်ိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်ရတာ အဲသည့်နောက်ပိုင်းက စပြီး
အိမ်မှာ ဘယ်အကောင်ကိုမှ မမွေးဖြစ်တော့ဘူး ကြောင်လေးကို သံယောဇဉ်ဖြစ်တော့
တော်တော်လေး ခံစားလိုက်ရတယ် စိတ်ထဲလဲ မကောင်းလိုက်တာ အရမ်းပဲလေ ……….
အတော်လေးကို အတွေးပါတဲ့ စာလေးပါ။ ဖတ်ပြီး…ခဏတောင်ငိုင်သွားတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်တွေးမိလို့ပါ ။
ကျမတို့ အိမ်မှာ အယ်လ်ဇေးရှင်းခွေးတွေမွေးထားတာ ၁၅ နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီ ။ စစချင်းတော့ ၂ ကောင်ပေါ့ ။နောက် မျိုးပွားတာ ဆုံးတာနဲ့ အခု နောက်ဆုံး ၁ ကောင်ရှိတယ်။ လူလို စကားမပြောတတ်တာပဲ ရှိတယ်။ ပြောတာ အကုန်နားလည်တယ်။ ကျမနဲ့တော့ မတည့်ဘူး။ အရိုးသားဆုံး ၀န်ခံရရင် အဲ့ဒီခွေး လူပါးဝတယ်ထင်လို့ ။ ခွေးက ဘယ်တော့မှ ခွေးလို မနေဘူး။ လူလိုနေချင်တယ်။
အမေ့အသဲကျော်ပါ ။ ကျမနဲ့တော့ တကျက်ကျက်။ အမေက ကျမထက် အဲ့ဒီခွေးကို ဆို သဲသဲလှုပ်မို့ ကြည့်မရတာလည်းပါတယ်။ သံယောဇဉ်တော့ ရှိတာပေါ့။
ဒါလေးဖတ်ပြီး ရင်ထဲ ထိသွားတယ် ။ ကျမသူနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးယူလိုက်အုန်းမယ်။ ဒုတိယ ကိုသစ်မင်းလို နောင်တမရချင်ဘူး။
ကိုသစ်မင်းပြောတဲ့ ကြာင်ကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာလိုမျိုး အတွေးအခေါ်က အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ ကျမ ဒါလေး သူငယ်ချင်းတယောက်ကို share ချင်ပါတယ် ။ ခွင့်ပြုပါ။
ကျေးဇူးပါ share လိုက်ပါပြီ။ ဒါနဲ့ ကြားမိလားမသိဘူး။” ၀တ” က အခု လူဝင်စားဘ၀နဲ့ ရွာထဲရောက်နေတာကြာပြီ။ တွေ့မိသေးလား…. ရွာထဲ က အပျိုမှန်သမျှ တယောက်မှ အလွတ်မပေးတတ်ဖူး။ သူကြီလည်း သူ့ကို ဆို ကြောက်ရတယ်။
ကျမကတော့ ကြောင်ရော ခွေးရောအကုန်ချစ်။ သူတို့နဲ့လည်း ပလူးပလဲနေတာဘဲ။ ရောဂါတွေ ဘာတွေ တွေးပူမနေဘူး။ သေရင်လည်းငိုရတာအမော။ အခုတော့ အိမ်မှာ အာပြဲစိန် ဆိုတဲ့ ကြောင်မလေးတကောင်ဘဲရှိတယ်။ ကမြင်းလိုက်တာလွန်လို့။
ဒေါ်ရွှေအိ စကားပြောတာ နဲနဲ ဆင်ခြင်နော်
ကျမကတော့ ကြောင်ရော ခွေးရောအကုန်ချစ်။
ကိုကြောင်ကြီးက ဒီစကားစောင့်နေတာ ဘယ်အချိန် ဘေးနားပေါ်လာမလဲ ကြည့်နေဦး
ကြောင်ကလေး ခွေးကလေး ဘာလေး ညာလေး ဘာတစ်ကောင်မှမချစ်တတ်ဘူး
ဒါပေမယ့် KingKaung ဇာတ်ကားထဲကကောင်ကြီးနဲ့ Planet of the apes ကားထဲကကောင်တွေကို သဘောကျတယ်ဗျာ… အရမ်းမိုက်ဒယ်…….
အင်း …………..ငါးကြော်မကြိုက် ကြောင်မိုက်စကားပြင်ရမဲ့ပုံ^^
ကြောင်တွေလဲ အစာ ကြိုက်တာခြင်းဘူးနော်….
ကိုသစ်မင်း ကြောင် အကြောင်း ဖတ်ရတော့
မောင်ပေ့ ကြောင်တွေ ကို သတိရမိတယ်
အမှတ်သဲညှာ ကြီးတာတော့ အမှန်ပဲ ကိုသစ်မင်းရေ
သူတို့ ကို တစ်ချက်လောက် ကန်မိရင်
ကိုယ့်အနား ကို ၃ ၊ ၄ ရက်လောက် မကပ်ချင်ဘူး ဗျ
ငယ်ကတည်း က ထမင်းနဲ့ ငါးနဲ့ ပဲ နယ်ကျွေးခဲ့တော့
တစ်ခါတစ်လေ ငါးမရလို့ 
ဆရာသမား များ က မစားတော့ပြန်ဘူး
( ဂေဇက် က ကိုကြောင် မဟုတ်ဘူးနော )